ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၆၇ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနား မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်
TNLA အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး တာဘုန်းကျော်နဲ့ မေးမြန်းချက်
မိမိတို့အစိုးရသက်တမ်း နောက်ဆုံးနှစ် မှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပနိုင်ဖို့နဲ့ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ကျင်းပနိုင်ဖို့ဟာ အစိုးရအတွက် အဓိကစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီနေ့ ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၆၇ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနား မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က အခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ထဲ မှာ အောင်မြင်မှုများရှိခဲ့သလို ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမယ့် စိန်ခေါ်မှုများလည်း ရှိနေပါသေးတယ်၊ လက်ရှိရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်စဉ်များ ဆက်လက်ရှင်သန်စေဖို့ ဒီမိုကရေစီစနစ် အမြစ်တွယ်ခိုင်မာစေဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်ကနေ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲပေါ်ပေါက်လာဖို့နဲ့ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ၂ဝ၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့အချက်များဟာ ကျနော်တို့ကျော်လွှားရမယ့် စိန်ခေါ်မှုများပဲဖြစ်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီစိန်ခေါ် မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် မိမိနိုင်ငံ မိမိလ့ူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးများမှာ မူတည်ပြီးလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်သင့်ပြင်ထိုက်တာတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ ပြင်ဆင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်"
ဒါ့အပြင် အစိုးရအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ် တဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ၄ ရပ်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာ အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ သိမ်မွေ့နက်နဲမှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိဖို့၊ ပြည်သူများ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာ လုံခြုံမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ တည်ငြိမ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများကို တချိန်တည်းနီးပါး စတင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအချို့မှာ ပြည်တွင်း ပဋိပက္ခများ၊ စစ်ပွဲများနဲ့ အတိဒုက္ခရောက်နေတာကို သင်ခန်းစာယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက် ကျနော်တို့အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်"
အခမ်းအနားမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ တပ်ဖွဲ့ တွေ နဲ့ အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေက ချီတက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနားကို ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းနဲ့ ဦးဉာဏ်ထွန်း၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌတွေ ဖြစ်တဲ့ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ တပ်မတော်အရာရှိတွေ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ၊ နိုင်ငံတကာ သံတမန်တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့အတွက် ဖိတ်ကြားထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့မှာ ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၊ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ ပလောင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦးတို့ တက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနား ကျင်းပတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တက်ရောက်ခွင့်ရသူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကို RFA သတင်းထောက် မဝေမာထွန်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
၆၇ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ဖိတ်စာရပေမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ TNLA ကပြောပါတယ်။ TNLA အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး တာဘုန်းကျော်ကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား ထိုင်းရောက် မြန်မာများ ကျင်းပ
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကြေညာစာတမ်း မိတ္တူများကို နေရာအနှံ့ဝေငှ
Nothing more than OLD Story.
Dear President Thein Sein... Beautiful and lovely speeches will not change the country better that is just noisy gong oraclanging cymbal. Please remember Chinses proverb which says.. What you have done( Character ) is louder than what you said. You need to keep faithfully what you have said and promise to people in love. The future of our country is in your hands at this moment. So do your best when the opportunity is in your hands before some other do later. Please record the excellent biography of yourself.
Jan 04, 2015 08:39 PM